Dagaal culus oo xalay Ururka Ahlusunna iyo Al-shabaab ku dhexmaray Dhuusmareeb. - Royal TVRoyal TV
Dagaal culus oo xalay Ururka Ahlusunna iyo Al-shabaab ku dhexmaray Dhuusmareeb.
Posted on January 19, 2012 by editor1
(Royaltv)Dagaal aad u qarar ayaa xalay ku dhexmaray gudaha & daafaha ee xarunta gobolka Galguduud xoogagga Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa Al-shabaab iyadoo aan la ogeyn khasaaraha ramsiga ah ee ka dhashay dagaalkaas.
Inkastoo labada dhinac ay guulo kala sheeganayaan ayaa haddana waxaa saakay ay xaladdu tahay mid daggan, iyadoo degmada ay gacanta ku hayaan xoogagga Ahlusunna iyadoo kuwii Al-shabaab ay iyaguna ku sugan yihiin bananka degmada.
Wararka la helayo ee dhinacyada ka madaxbannaan ayaa waxay sheegayaan inay ku dhinteen dagaalkaas shan qof oo labada dhinac ka tirsan tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen.
“Dagaalka xooggiisu wuxuu ka dhacay duleedka degmada, tiro badan oo ka tirsan Al-shabaab ayaana lagu dilay,” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Dhuusomareeb ee ururka Ahlusunna, Sheekh Cabdiraxmaan Geedo-qoroow, isagoo aan sheegin khasaare dhankooda soo gaaray.
Sidoo kale, saraakiil u hadlay Al-shabaab ayaa iyaguna sheegay inay muddo kooban gacanta ku dhigeen degmada Dhuusomareeb, ayna si iskood ah uga baxeen, waxay xuseen inay dileen dhowr ka mid ah dagaalyahannnada Ahlusunna.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Dhuusomareeb ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhacay gudaha degmada ayna dhinacyadu isku adeegsadeen hub culus iyo mid fudud, waxaana intii uu dagaalku socday aan jirin cid gurigeeda ka baxday.
Degmada Dhuusmareeb ayaa habeennadii ugu dambeeyay bandow ahayd, iyadoo ay u suurogashay xoogagga Al-shabaab inay gudaha u galaan degmadaas iyadoo uu saaran yahay Bandow ayna kula dagaalamaan Ahlusunna.